उपेन्द्रको रणनीति : बाहिर विरोध, भित्रभित्रै मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ्ग
काठमाडौं, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कट्टर विरोधीको रुपमा छवि बनाएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भित्रभित्रै सरकारमा सहभागी हुन बार्गेनिङ्ग गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
काठमाडौं, ३१ बैशाख । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको नेतामा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो चयन भएका छन् ।
काठमाडौं, १८ बैशाख । कोभिड १९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आएको र सङ्क्रमित बिरामीलाई अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउनसमेत नसकिने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
तीन सय परिवारलाई लालपुर्जा
महोत्तरी, ९ बैशाख । बर्दिवास नगरपालिका–७ का करिब तीन सय घरपरिवारले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् । पुस्तौँदेखि जग्गामा बस्दै आए पनि उनीहरूले धनीपुर्जा पाएका छन् ।
६ स्थानीय तहमा मात्र कोरोना अस्पताल
राजविराज, ९ बैशाख । कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसक्दा सप्तरीका १८ मध्ये ६ वटा स्थानीय तहले मात्रै कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदलाई स्पष्टीकरण
रूपन्देही, ९ बैशाख । पार्टी नीति र निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा चार सांसद मन्त्री भएपछि जसपा) को लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले चारैजना सांसदलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
जनमत पार्टीको प्रथम उपाध्यक्षको उम्मेदवार अब्दुल खान
काठमाडौं, २० चैत । यहि चैत २८ गते जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा हुन लागेको छ ।
कांग्रेस र जसपाको बैठक निष्कर्षविहीन
काठमाडौं, २८ फागुन । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेस र जसपा नेताहरूबीचको बैठक ठोस सहमति नगरी टुंगिएको छ ।
ओलीको पक्षमा ९२ सांसद पुग्छन् : महेश बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले आफूहरुको पक्षमा भोलिबाट ९२ जना सांसद पुग्ने दाबी गरेका छन् । उनले अबको प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओली नै हुने दाबी गरे ।
मुलुक सञ्चालनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी नै असफल : अध्यक्ष यादव
इलाम, १४ फागुन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान उल्लंघन गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा : प्रचण्ड
सर्लाही, ७ फागुन । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखौं जनताको रगत पसिनाबाट ल्याइएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन् ।
अदालतको भर छैन : डा. भट्टराई
अर्घाखाँची, २० माघ । जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा जनताको पक्षमा फैसला गर्छ भनेर कुरेर बस्न नहुने बताएका छन् ।